I-Tax Tax isebenza njani kumazwe e-27 wehlabathi-ii-Geofumadas
Indlela Tax Property kumazwe 27 emhlabeni
NgoFebruwari, 2016 cadastre
Ukususela kwingxelo ye-Ignacio Lagarda Lagarda, igrafu ibonisa ulwalamano lwerhafu yepropati ngokubhekiselele kwimveliso emveliso yasekhaya yaseLatin America.
Ukuxubusha iMexico ngokubhekiselele kwihlabathi, sibona ukuba olu hlobo lerhafu alunjalo ngokuthelekisekileyo xa lufaniswa namanye amazwe ehlabathi. Siyabona ukuba Costa Rica, ePanama, Bolivia, El Salvador kunye Chile zaphezulu, ezifana nezo Slovakia, Czech Republic, Austria, Hungary, Turkey, eJamani, Norway, Portugal, Poland kunye nemilinganiselo eFinland. Ngoxa i-Uruguay, iParaguay neArgentina zifaniswa neBelgium, i-Ireland, iDenmark, iSweden neGrisi. Kubuzwa ukuba ngaba sicinga ukuba i-GDP yamaninzi ala mazwe ayinakulinganiswa nesicatshulwa se-gini kwaye ngokuqinisekileyo ibangela ukungalingani kwezentlalo.
Ke inkcubeko jikelele, oko umdla ukubona le theyibhile ilandelayo ishwankathela indlela irhafu isebenza kumazwe 27, apho 62% iqokelelwa ngurhulumente kazwelonke kunye 48% ngoorhulumente beengingqi okanye oomasipala.
Umqathango werhafu yepropati
Uninzi lwaomasipala luqokelela irhafu kwi-real estate kumaxabiso atshintshayo, kuquka umhlaba, izakhiwo zorhwebo kunye nepropati yokuhlala. Oomasipala bahlawula irhafu kwiindawo zokuphucula izakhiwo.
Izigwebo ezingezantsi kwinqanaba likarhulumente zivame ukubeka iirhafu zepropati kubanikazi bezindlu. Ezinye izakhiwo ezibonakalayo (nezinye izinto ezingabonakaliyo) nazo zixabiso kwiindawo ezininzi. I-appraisal ngokuqhelekileyo isekelwe kwipesenti yexabiso lokuthengisa. Iirhafu zepropati zithathwa kwiirhafu zerhafu.
Abanikazi bomhlaba kufuneka bahlawule irhafu yomhlaba ebalwe kwixabiso eliphambili. Intlawulo yeerhafu ixhomekeke kwiiruble kwaye ayifanelekanga.
Intlawulo yepropati yasePoland ihlawuliswa kubantu kunye nezoqoqosho, kubandakanywa amabhizinisi karhulumente kunye nokusebenzisana. Irhafu iveliswe kwixabiso lemhlaba nezakhiwo, ezingasetyenziswanga malunga nokulima. Iirhafu zerhafu ziyahluka ngokohlobo lwepropati. Amanani amaninzi aphezulu: Kwizakhiwo zeplati, i-PLN 0.18 ngomitha we square, Kwizakhiwo ezisetyenziselwa iinjongo zorhwebo. I-PLN i-6.63 nganye ngemitha yesigca, Kwizinye i zakhiwo, i-PLN 2.21 nganye ngemitha yesikwere, Ngokwakhelwe iinqanaba, i-2% yexabiso layo, Umhlaba owenzelwe iinjongo zorhwebo, i-PLN 0.22 ngemitha yesikwele.
Bonke abanikazi bepropati eBulgaria baxhomekeke kwerhafu yokwakha, i-tax base ixabiso elinqunywe nguRhulumente. Amaxabiso ahluka phakathi kwe-0.2% kunye ne-0.6%. Ierhafu mazihlawulwe ngekota nganye koomasipala.
Intlawulo yepropati iqokelelwa kubanikazi bezindlu zangaphandle, kwaye i-tax base iqwalasela zombini umhlaba kunye nezakhiwo. Ixabiso lixhomekeke kumhlobo kunye nomgangatho welizwe, ubukhulu bayo kunye nexabiso layo. Phantse zonke izakhiwo zokuhlala ziphantsi kweerhafu zepropati. Imirhumo kuxhomekeke kwindlela yokwakha, kunye nokusetyenziswa kwayo. Uninzi lwazo lusebenza.
Abanikazi bomhlaba baxhomekeke kwerhafu. Rates iyahlukahluka kuxhomekeke ukusetyenziswa komhlaba (kwimeko lomhlaba wezolimo), kwaye kwindawo yakho uhlobo, (kwimeko kwamanye amazwe) abanini Building zixhomekeke kwirhafu kwizakhiwo. Amaxabiso ahlukahluka kuxhomekeke kwisithuba somgangatho kunye nokusetyenziswa kwesakhiwo.
Ireyithi yerhafu kwizakhiwo yonyaka, kwaye ibalwa kwi-1.5% yexabiso lesakhiwo. Ireyithi yerhafu kwipropati yonyaka, kwaye ibalwa phakathi kwe-15 kunye ne-120 ngemitha yesikwere. Intlawulo yepropati yomhlaba wezolimo iyahluka phakathi kwe-14,000 kunye ne-45,000 ngehektare, kuxhomekeke ekuhlelweni komhlaba.
Ierhafu zepropati zihlawulwa kwixabiso lezakhiwo, njengoko zichongiwe ngu rhu lumente. Iifom zentuthuko zisetyenzisiweyo, ezingekho ngaphezulu kwe-1.5%. Ezinye izakhiwo ziyaxolelwa. Ierhafu zepropati nazo zisebenza kwizikhephe.
Irhafu ityala kubanikazi bazo zonke iintlobo zokwakha. Isiseko serhafu ingaba yindawo engaphantsi, okanye ixabiso lentengiso le propati, njengoko kugqitywe ngumasipala. Kukho "irhafu kwipropati engatshintshiyo", esebenzayo kuzo zonke izakhiwo zomhlaba ezingakhiwa. Inqanaba eliphezulu le rhafu yi-HUF 100 nganye ngomitha we square.
Irhafu yerhafu yerhafu yonyaka efuneka ihlawulwe ngabo bonke abemi bomhlaba kwiphondo ngalinye, ngaphandle kwalase-Australian Capital Territory. Kwinqanaba ngalinye, linikeza ukukhanselwa okupheleleyo okanye okukodwa kwerhafu ngokungakhathaliseki ukuba ipropati yindawo yokuhlala yohlawuli berhafu. Iirhafu zerhafu ziyahluka phakathi kwamazwe.
Abantu kunye neenkampani ezithengiswayo kwiJapan ziphantsi kweerhafu zepropati ezibizwa ngokuba yi-"Tax Value Land". Le rhafu yi0.3%. Isiseko sentlawulo ngokuqhelekileyo i70% ukuya kwi-80% yexabiso lentengiso. Ezinye iintlobo zepropati zikhutshwa kule rhafu, njengomhlaba osetyenziswa ngabantu ngabanye, ukuba nje indawo engagqithanga i-1,000 square metres.
Intlawulo yerhafu eMalaysia ibizwa ngokuba yi-"Real Real Property Reins". Le yerhafu ngolwaa yokwehla kwezinga 20% ukuya 5%, kuxhomekeke kwixesha olubandakanya inzuzo okanye ilahleko eziyinkunzi ingqalelo nxamnye irhafu kwingeniso efunyenwe kunyaka wangoku okanye kwiminyaka elizayo, ngaphandle kwiimeko isimo yezabelo nkampani yendawo yokuhlala. Umntu onokuthi uMalayula angacela ukuxolelwa kwerhafu ukusetyenziswa kwepropati njengendawo yokuhlala. RM uxolelo 5,000 okanye 10% ngengeniso emiselwe, nokuba yiyiphi na enkulu, zifunyanwa bonke abantu ngaphandle kwesithintelo kunokuba ikukusigcina yayo njengabemi Malaysian.
Le yerhafu ibizwa ngokuba "IRhafu yePropati". Le rhafu yonyaka, kwaye izinga elifanelekileyo li-4% yeendawo zokuhlala ezihlala ngumnikazi, kunye ne-13% kuzo zonke ezinye iinjongo.
Into eyaziwayo kukuba iirhafu zihlawulwa kwi-estate and value of land.
Amagunya okuhlawula irhafu asekuhlaleni ahlawulisa irhafu kwi-estate.
Oomasipala bahlawula irhafu yerhafu.
Le rhafu ibizwa ngokuba yi "Impahla kunye neNtlawulo yomhlaba". Abanikazi bomhlaba okanye izakhiwo kwiindawo ezichongiweyo bangaxhomekeka kwerhafu yonyaka okanye phantsi koMthetho weRhafu yoPhuhliso lweNgingqi we-1965 kunye noMthetho weRhafu we-1965. Intlawulo yophuhliso lwengingqi isekelwe kwixabiso elithengiweyo (sic) lomhlaba. Ireyithi yonyaka yi-12.5% yovavanyo lwentlawulo yepropati.
Iirhafu zepropati zisekelwe kwiimilinganiselo ezisemgangathweni, kwaye zihlawulwa kwiinkampani ezisemthethweni kunye nabanikazi ngabanye be-rustic okanye idolophu yase-dolophu. Intlawulo ihlawuliswa kwixabiso elongezelelweyo kuzo zonke iipropati phantsi kwentlawulo. Zibe ezi .2% kule yokuqala .6 irhafu iiyunithi ezilishumi% eleshumi elinesithandathu ukuya kwenye ukusuka kwisinye ukuya irhafu unit, kunye 1% ukuba idlule kwesi sixa.
EGuyana irhafu yepropati ibizwa ngokuba yiRhafu yePropati, kwaye yerhafu yonyaka ehlawuliswe "kwipropati yentengiso" ekupheleni konyaka. Ipropati yeNetyala yimalini apho ixabiso elipheleleyo lepropati yomntu lidlula inani elipheleleyo lazo zonke iitaliti ezigcinwe ngumntu. Le propati iquka yonke impahla enokususwa kunye engenakususwa kwamalungelo ngamnye naluphi na uhlobo, iziphumo zakho (ise eGuyana okanye kwenye indawo), kunye iinzuzo evela kwintengiso yomhlaba okanye imali okanye utyalo-emele inzuzo enjalo. Izixa-mali ezininzi zingabandakanywa ekubalweni kwepropati yentengo, kwaye inani lokuncitshiswa lingafumaneka kwintengo yepropathi xa elo xabiso lenza isiseko serhafu. Xa sithetha nje ngokubanzi, eli xabiso kuhlawulwa isetyenziswa malunga nepropati ezifunyenwe ngomhla okanye emva 1 1991 January, lo gama i-ixabiso lemarike esetyenziswa ngokunxulumene iipropati ezifunyenwe phambi kwaloo mhla. Iirhafu kwerhafu yepropati yeenkampani zi-0% ukuya kwi-G yokuqala ye-500,00, i-0.5% ukuya kwi-G $ 5 yezigidi, kunye neXXMUM% ukuya kwenye ixabiso ngokwemali yerhafu. Amazinga yerhafu abantu 075% for kuqala million G $ 0, 5% oku kulandelayo G $ 0.5 million kwaye .5% nasiphi isixa ngokuxhomekeka kwirhafu.
Ireyithi yerhafu isekelwe kwixabiso lepropati, ngokwe-appraisal kwigunya elichaphazelekayo. Irhafu ngokuqhelekileyo ijikeleze i-0.1% yovavanyo. Le yerhafu yonyaka, kodwa ngokuqhelekileyo ayihlawulwa de ibe ipropathi ithengiswe.
Imirhumo eyahlukeneyo yenziwe ngamagosa kamasipala kwizixeko nakwiidolophu ukuya kwiindawo zokuhlala. Ierhafu kwakhona ziveliswa yizindlu zangaphandle ngaphandle kwemida yasezidolophini. Irhafu ijikeleze i-1%.
Intlawulo yepropati ibizwa ngokuba yiRhafu yeNdawo, kwaye ihlawulwa ngokwexabiso elivakalisiweyo okanye elixabisekileyo lomhlaba kunye nezakhiwo ezingasigxina, izakhiwo kunye nezibonelelo, kubandakanywa imishini kunye nezixhobo eziyingxenye yokwakha. Ierhafu mazihlawulwe ngekota. Iipropati ezixabiswa ngaphantsi kwe-150,000 zikhutshwa kwiirhafu
Iipropati zezindlu eziphantsi kwePanama, i-rustic okanye idolophu, ziphantsi kweerhafu zepropati ezibizwa ngokuba yi-"Real Estate Tax". Abanikazi kufuneka bahlawule umrhumo ngokwezinga eliqhubekayo eliphuma kwi-1.4% yexabiso ngaphezu kwe-balnas ye-10,000, kwi-2.1% ngaphezulu kwe-balboas ye-75,000. Isiseko salo lixabiso elinqunywe yiKomishoni yeGround. Kukho ukungabikho kwamanani, kuquka izakhiwo kunye nokuphuculwa okusetyenziswa yimibutho yokucebisa okanye imibutho karhulumente okanye ezo zakhiwo ngexabiso elingaphantsi kwama-balboas e-10,000.
Oomasipala baqokelela irhafu yonyaka kwiipropati zasemaphandleni nasezidolophini ezibizwa ngokuthi "Imirhumo kwimimandla yasezidolophini nasemaphandleni. Irhafu isekelwe kwixabiso elisemthethweni ngaphantsi kokuncitshiswa kweminye. Amanani aphantsi. Ukuba umhlawuli-ntlawulo unemihlaba emininzi, ixabiso liqokelelwe ngumasipala, kwaye iirhafu zisetyenzisiweyo kwixabiso lilonke kumasipala.
Abanikazi bezindlu eziphantsi kweGuatemala kufuneka bahlawule irhafu yerhafu yonyaka ebizwa ngokuba "irhafu yerhafu yedwa". Imilinganiselo efanelekileyo yileyo ifunyenwe kubhaliso lwepropati esemthethweni, nangona izikhulu zerhafu zingahlaziya ixabiso. Iirhafu zerhafu zivela kwi-0% ye-Q yokuqala ye-2,000, kwi-0.9% nayiphi na ixabiso elingaphezu kwe-Q 70,000.
Honduras Oomasipala baqokelela irhafu kwiindawo ezisemaphandleni nasezidolophini zasemaphandleni ukusuka ekuqaleni xabiso lomhlaba. Ukubala irhafu yendawo yokuhlala yasezidolophini qwalasela ukubaluleka komhlaba kunye nokuphuculwa; Kwiipropati zasemaphandleni, ukubaluleka kwezityalo ezisisigxina zongezwa. Emva yokubala ixabiso erhafelwayo ipropati, rate ukusuka 2.50 ukuba 3.50 lempiras lamawaka nganye, nto leyo zingaphuculwa ngokuthe ngexabiso akukho mkhulu 0.50 ngamnye ngonyaka kuyasebenza. Ukongezelela, umyalelo ugunyazisa ukuba unyaka ngamnye we-5 uhlaziywe kwiimpawu ze-cadastral kwaye wavuma ipesenti kunye nabemi.
Itafile ithathwa kwimveliso kaMiguel Ángel Montoya Martín del Campo kwipapasho yakhe "Uhlalutyo lokuqhathaniswa kwemeko yerhafu kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi".
Post edlulileyo«Edlulileyo ISetyhula 1: Inkomfa I-TOPCART 2016
Post Next Masters Online e Geographic Information SystemsOkulandelayo "
Enye Impendulo "Yeyiphi Imisebenzi Yerhafu Yempahla Emazweni E-27 Yehlabathi"
i-rivera light rivera uthi:
EColombia, irhafu kwezindlu kunye nazo zonke iintlobo zokwakha zibizwa ngokuba yirhafu yepropathi, ibekwa ngurhulumente ngokuthanda kwayo kwaye yeyona nto iphambili yobusela enokubakho, sele kukho amawaka abanini, NGOKUQINISEKILEYO abangakwaziyo ukuhlawula. , umntu ongazange ayihlawule ekuqaleni konyaka ayinakwenziwa kwisaphulelo sepesenti ye-10 kwaye ukuba akuhlawulwa ngexesha urhulumente ebeka inzala emiselweyo engavumelekanga ukuba ibize kubantu bendalo okanye naliphi na ilizwe elizweni kodwa Urhulumente ukuba wenza njalo kwaye uqhuba imihla ngemihla, njengomzekelo ndikuxelela ukuba andinakuhlawula irhafu yendlu iminyaka emine ekugqibeleni ndakwazi ukuhlawula imali-mboleko kwaye inzala ibisele iselixabiso elifanayo letyala !!! I-Colombia yiyo le nto ilizwe lithatha indawo yesihlanu ngokungalingani kunye nokungabikho kokusesikweni. Kwinkohlakalo kwiPOLISI, KUFUNEKA UZE UZE UYAZI.